Home » Creative Writing » နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် ဂွမ်းနုလေးရယ်
ဂွမ်းက.. ဖြူစင်နူးညံ့အောင်လုပ်ရတာမို့.. ကမ်မစ်ကယ်တွေတော့ ရောပါမှာပါ..။
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေနဲ့ ဆွဲစိလိုက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ သဂျီး။ စားသုံးသူများကာကွယ်ရေး အသင်းလေးတောင် အယက်အကန်ခံနေရတဲ့ဘ၀။
ယူအက်စ်ပုံစံအတိုင်းဆို.. စားသုံးသူကာကွယ်ရေးက နောက်မှ…။ ရှေ့က မီဒီယာကရေးရင်.. နောက်က.. စားသုံးသူတွေထဲ.. အသဲရောဂါ.. သွေးရောဂါ.. ဘာညာနဲ့နေမကောင်းဖြစ်.. သေဖူးတဲ့သူမိသားစုဝင်တွေက..ေ၇ှ့နေငှားပြီး.. လျှော်ကြေးလိုက်ပြီပဲ…။
ဂွမ်းဆိုရင်တော့ ၀ါဂွမ်း ကထုတ်လုပ်တာမို့ သိပ်ပြသနာမရှိပေမယ့်
ဒါဆိုရင်တော့ မလွယ်တော့ဘူး ထင်တယ်။ ပြီးတော့ လုပ်ငန်းကလည်း အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းလေးလို မဖြစ်နိုင်ဘူး။ လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တိုးရတော့မယ့် စွန့်စားခန်းဖြစ်နေပြီ။
Phyu Myat Pearl says:
Pucci ကထုတ်တဲ့ ကြက်သားမျှင်ပေါင်မုန့်လား တီတီ …
. မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတံဆိပ်မဟုတ်ဘူး။ တခြားတံဆိပ်တွေ အများကြီး။ သောက်သောက်လဲ ရောင်းနေကြတာ။ ဒီထဲမှာ တံဆိပ်နာမည်ပြောရင် ပြဿနာများမှာစိုးလို့ မပြောတာပါ။
အဲဒီမုန့်ကို အရမ်းကြိုက်ပြီး တော်တော်လည်း စားခဲ့တယ်။
(ဆင်းရဲခြင်း ချမ်းသာခြင်း အကြောင်းပြချက်များဖြင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို တန်ဖိုး မချစကောင်း။ ) ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကိုတော့ ကြိုက်သွားပြီ။
.ဟုတ်ပါတယ် ။ ကျမလည်း အဲဒီမုန့် တအားကြိုက်ပြီး နင်းကန်စားခဲ့တာ။ ၃ -၄ထုပ်လောက်သွားဝယ်ပြီး အဲဒီ အသားမျှင် ဆိုတာလေးတွေကို ရေထဲထည့်စိမ်လိုက်ပါ။ ဇွန်းလေးနဲ့ မွှေပေးရုံနဲ့ ဂွမ်းစလေးတွေ ဖွေးပြီးပေါ်လာတာပဲ။ နယ်ကို ကားကြီးတွေနဲ့ လိုက်ဖြန့်တဲ့မုန့်ပါ။ အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းလေးတွေ မဖြစ်နိုင်။ စက်ရုံတွေဘာတွေနဲ့ ထုတ်တာမျိုးလား မသိဘူး။
ဒီနေ့ စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ လှောင်ကန်ထဲကအချဉ်ရေလုက်ငန်းရယ်
ဒီနေ့ ဖဘပေါ်မှာ အချဉ်ရည်လုပ်ငန်းဆိုတာ တွေ့လိုက်တယ်။ အဲဒါတွေကို ပိတ်တဲ့အဆင့်လောက်ပဲ တားမြစ်နိုင်ကြတယ်နော်။ တခြား ဘာဥပဒေမှ မရှိကြတော့ဘူးလား မသိဘူး။ အစားအသောက်ကိစ္စက လူညွန့်တုံးမယ့်ကိစ္စဆိုတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကိုင်တွယ်ရမှာ။
တံဆိပ် မတင် ရင်တောင်မှ ပေါင်မုန့်ပုံလေး တင်ပေးပါလား
.. သူတို့က Calvin Klein လို့ခေါ်တယ်.. ရေးတော့… CK တဲ့..
.နောက်ရက်တွေ မုန့်သွားဝယ်ပြီး တင်ပေးမယ်လို့ ကတိမပေးတော့ဘူးနော်။ ပေါပါတယ် ကထူးဆန်းရဲ့။ ဆိုင်တိုင်းလိုလိုမှာ ရှိတာပဲ။ တံဆိပ်အမျိုးမျိုး ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့။ ကြက်သားမျှင်ပါတဲ့ ပေါင်မုန့်ဆို သိကြတာပဲ။ အောက်ခံပလတ်စတစ်ခွက်လေးနဲ့။ တစ်ခုကို ပျှမ်းမျှ ၃၀၀ ပါ။
. အောက်ခံပလတ်စတစ်ခွက်လေးနဲ့ ကြက်သားမျှင်ပါတဲ့ ပေါင်မုန့်ဆိုတာကို….
အရသာလေး မဆိုးဘူးဆိုပြီး..ဗိုက်ဆာတိုင်း တွေ့ရာဆိုင်မှာ ဝင်ဝယ် စားတာ…
အခုတော့….. ဘာမှကို မစားရဲသလောက်ဖြစ်နေပြီ ။
သတင်းမီဒီယာသမားတွေ တာဝန်ကျေသလိုလို ရှိပါတယ်။
တာဝန်ကျေသလိုလို ရှိတယ်ဆိုတာကို ဘာကို ကြည့် ပြောသလဲဆိုတော့…
သတင်းစာတို့ ဂျာနယ်တို့မှာ… (ဥပမာ အချဉ်ရည်(ငရုပ်ဆီ))
ဒါပေမယ့်…. မစားသင့်ကြောင်း အော်နေရုံပဲ…. တတ်နိုင်တယ်။
မစားသုံးသင့်တာတွေကို လက်လှမ်းမမှီအောင်..ဈေးကွက်ထဲကနေ ပျောက်သွားအောင်..
အရေးယူမှု ထိထိရောက်ရောက် မရှိတဲ့အခါကျတော့.. ရပ်ကွက်ထဲမှာ… (စာမဖတ်/သုတမရှာတတ်သူတွေ အများသားဆိုတော့… ) အလျဉ်းသင့်သလို သုံးစွဲနေကြရဆဲပဲ… ။
ဆိုတော့… ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေက…
အာဏာ သုံးပြီး…ထိရောက်အောင် မတားဆီးနိုင်ကြဘူးလားလို့…မေးရမလိုဖြစ်….
တားဆီးတဲ့အဖွဲ့တွေ ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး အရေးယူတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ… ရှိမှာပါ… ။
ဒီဟာ/ဟိုဟာ မစားသင့်ဘူးလို့…ထုတ်ပြန်ကြေညာရုံနဲ့ တာဝန်မကျေပါဘူး။
မစားသင့်တာတွေ ပြည်သူလူထုလက်လက်မှီရာကို ရောက်မလာအောင်အထိ…
.ရေဆုံးရေဖျား လိုက်လံ ဖော်ထုတ် တင်ပြပေးလို လိုနေသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
”ငါ တစ်သက်လုံးစားလာတာ..ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး…”လို့ ပြန်ပြောတယ်။
”ဟုတ်တယ်… တစ်ထုတ် စားရုံနဲ့…ဗုံးခနဲတော့..လဲ မသေသွားပါဘူး… ဒါပေမဲ့… ဆိုးကျိုးတွေကတော့…
အဲ့လိုပဲ…တော်တော်များများက…. ဗုံးခနဲ လဲသေသွားမှသာ ဆိုးကျိုး လို့…ထင်နေကြတယ်.. ။
ပူကီ တံဆိပ်ကတော့ စိတ်ချရမယ် ဆက်ဆက်ရေ။ ဒါက နာမည်တစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့ လုပ်မယ် မထင်ဘူး။
နံပြားတို့ အီကြာကွေးတို့ ဆိုလည်း ဆေးဝါးတွေ ထည့်တယ် အန်ကယ်ရေ။ တိတိကျကျတော့ မသိ။ အစားအသောက်တွေ မပုပ်မသိုးအောင် တာရှည်ခံအောင် တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း လုပ်ကြတာပဲ။ ခုဟာကတော့ အသားနေရာမှာ ဂွမ်းထည့်လိုက်တော့ တစ်မျိုးကြီးပဲ။ စားရတဲ့လူက လူ့အဆင့် မရှိတော့သလို။ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းပါ ထိတာပေါ့။
ကြက်သားလိပ်လို့ခေါ်တဲ့ ပေါင်မုန့်လား ဘယ်တံဆိပ်လဲ အစ်မ
အစ်မရေ အဲ့ဒါကို Chicken Roll လို့ခေါ်တယ် ဘာလို့သိလဲဆိုတော့။ E’ldorado က မုန့်ဖုတ်သင်တန်းကျောင်းတုန်းက အဲ့ဒါလုပ်တာ သင်ခဲ့ဖူးလို့ပါ။ တကယ်နာမည်ရှိတဲ့ မုန့်တိုက်တွေကတော့
ကျနော်က အဲ့လိုမုန့်တွေ သိပ်မကြိုက်လို့မစားဖြစ်တာ တော်သေးတယ်လို့ဆိုရမယ်
မုန့်က ခလေးတွေအကြိုက် လေးပေါက်ရေ။
ခလေးတွေက ရှောင်နိုင်ပါ့မလား။ အိမ်က သားဆို မရဘူး။ အဲဒီမုန့် မြင်တာနဲ့ အကုန်ကျုံးယူသွားပြီး တစ်ယောက်ထဲ စားခဲ့တာ။
ဘယ်လို လုပ်ရပါ့ နော်။
မြန်မာပြည်က.. ရထားသမျှစားစရာတွေ.. ရေတညစိမ်ကြည့်…
ဘယ်သူတွေတက်တက် လတ်တလောမှာ တိုင်းပြည်မတိုးတက်နိုင်သေးပါဘူး။ အဝေးကြီးလိုသေးတာကို။ ဘာလို့များ ပြန်လာချင်ရတာတုန်း။
ဂွမ်းကို ဝါးလိုက်မိရင် ကြက်သားလိုကြေမသွား ပဲ အဖတ်အဖြစ် နဲ့ ကျန်မနေ ခဲ့ဘူးလား
မကျန်ခဲ့ဘူး။ မွနေတာပဲ။ အရသာကကောင်းလွန်းတော့ စားသာကြည့်ပါ။ အဲဒါလေးတွေ ခြစ်ယူပြီး ရေထဲခဏမွှေပေး၊ သုံးလေးရေလောက်လဲပြီးရင်ကို ပေါ်ပါပြီ။ ကိုင်ကြည့်ရင် သိပ်သိသာတယ်။ မုန့် ၃ -၄ ခုလောက်သွားဝယ်ပြီး လက်တွေ့သာ စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ ဦးနိုရေ။
ရန်ကုန်မှာတုန်းက ကြိုက်လို့ ခဏခဏ ဝယ်စားဖြစ်တယ်။ အင်း ဘာမှကို စိတ်ချလက်ချ မစားရဲအောင်ပဲ။ ရင်ကျပ်ရှိတဲ့ သမီးတော် ရန်ကုန်မှာ ရေခဲမုန့် စားမရဘူး။ စားတာနဲ့ နောက်တနေ့ ဆေးရုံပြေးတော့ပဲ မပြုရေ။ အခု ဒီမှာ ရေခဲမုန့်စားတာ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး သူလည်း အခု စားချင်တာ စိတ်ကြိုက်စားနေပြီ။ ကိုယ်တွေ ဆီမှာ အဲ့လို စိတ်ချလက်ချ ဘယ်တော့များမှ ဖြစ်ပါ့မလဲနော်။
အစစ်ပဲ။ မမှီရေ။ ကျမသူငယ်ချင်း ရှူနာရှိုက်ကုန်းလေး ရောဂါတွေ ဗရပွနဲ့ စလုံးရောက်သွားတာ တစ်လတောင်မကြာ၊ ဒေါင်ဒေါင်မြည်သွားသတဲ့။ ခေါင်းမူး ၀မ်းရစ်လေးတောင် မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့။
ဘာပဲစားစား သတိထားနေရတယ် အမရယ်…။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ်စားတာ ရောဂါဝယ်သလိုများဖြစ်နေမလားလို့.. ဟိုအစားအစာလဲ မသင်္ကာ ဒီအစားအစာလဲ မသင်္ကာနဲ့..။
အစားအသောက်က လူညွန့်တုံးမယ့် ကိစ္စဆိုတော့ အမေစု တစ်ခုခု လုပ်ပေးမယ် မျှော်လင့်ရတာပဲနော်။ တင်းကြပ်တဲ့ ဥပဒေ တစ်ခုခု ထုတ်ပေးမယ် မျှော်လင့်ရတာပဲ။ ဆီကတော့ ရှောင်ဖို့ တယ်မလွယ်။
ပြောချင်တာတွေကတော့ အများကြီးရယ် . .
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) added3new photos.Like Page
မြန်မာလူမျိုးတွေ လူကောင်သေး၊ ဦးနှောက်ကျနေတာတွေ ဘယ်ကစပြင်ရပါ့မလဲ မသိ။ စိတ်မောပါဘိ။ အဲဒီထဲမှာ ကိုယ့်ခလေး ၂ယောက်ပါ ပါနေတယ်။
ဘယ်လူသားကိုမှ ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမျှော်မာန်လျှော့ ကန်တော့ခြင်းမပြုခိုင်းနဲ့..။ မိဘပါ..အပါအ၀င်ပဲ..။